बास्कोटामाथि छानबिन गर्न ओलीद्वारा अस्वीकार - Kantipath.com
काठमाडौं । निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको कसिसन प्रकरणबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।
शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेपनि ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । ओलीले अस्वीकार गरेसँगै बास्कोटामाथि आन्तरिक छानबिन टरेको छु ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड कमिसनका लागि डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले सञ्चारमन्त्री पदबाट बिहीबार राजीनामा दिइसकेका छन् ।
‘सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । तत् पश्चात अख्तियार लगायतका राज्यका निकायहरुले त्यसबारे थप अध्ययन गरिरहेको बैठकमा जानकारी गराउने काम भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने ।
यद्यपि बास्कोटाको अडियो प्रधानमन्त्रीलाई डेढ दुई महिना पहिले नै जानकारी भएको भन्दै खबरहरु प्रकाशित भइरहेको बेला बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अध्ययन गर्नेबारे भने कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको ती नेताले जानकारी दिए ।
Previous Previous post: राजधानीमा परिवारले गर्‍यो २५ वर्षे शीतल चौधरीको हत्या !
Next Next post: यस्ता छन् छथरको १० उपलब्धिहरु
‘पत्रकार’ हु भन्ने न्यौपानेसहित २ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
‘विक्रम सम्वत् खारेज गरी ईश्वी सम्वत् लागू गरौँ’ : डा.भट्टराई
महासङ्घलाई पत्रकार कारवाही सिफारिसबारे खुलाई पठाउन काउन्सिलको अनुरोध
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेपछी, के हुँदैछ निर्णय ?
सरकारी चिनी उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द, उत्पादक संघ मौन !